‘राज्यको ढुकुटी बढाउन’ प्रधानमन्त्रीले ८ वटा भैंसी बेचेपछि .......
मुख्य पृष्ठरोचक रमाइलो‘राज्यको ढुकुटी बढाउन’ प्रधानमन्त्रीले ८ वटा भैंसी बेचेपछि …….
‘राज्यको ढुकुटी बढाउन’ प्रधानमन्त्रीले ८ वटा भैंसी बेचेपछि …….
हाम्रो देशमा बेला–बेला नेता–मन्त्रीहरूले राज्यको ढुकुटी फजुल खर्चमा उडाएको समाचार आइरहन्छन् । तर, पाकिस्तानमा भने नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले फजुल खर्चमा पूरै कटौती गरेका छन् । त्यत्ति मात्रै हैन, उनले त राज्यको ढुकुटी बढाउन भन्दै ८ वटा भैंसीसमेत बेचिदिएका छन् । अहिले यो खबर निकै चर्चामा छ ।
खबरअनुसार पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको कार्यकालमा किनेर पालिँदै आएको भैंसी नयाँ प्रधानमन्त्री इमरान खानले बेचेका हुन् । भैंसी बेचेर आएको पैसा उनले राज्यकोषमा जम्मा गरिसकेका छन् ।
खानले बेचेका ८ वटा भैंसीबाट करिब २२ लाख रुपैयाँ पैसा संकलन भएको छ । खान उनै प्रधानमन्त्री हुन्, जसले यसअघि बुलेटप्रुफ कारको लिलामीबाट झन्डै ७ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम भेला पारेर राज्यकोषमा हालेका थिए ।
खानले बेचेका ८ वटा भैंसीमध्ये केही भैंसी भने पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफका समर्थकले किनेका छन् । उनले सरिफलाई उक्त भैंसी उपहारमा दिन भन्दै किनेको बताइएको छ ।